Agwọ Osisi Agwọ - ingzụlite “Mama N'asụsụ Ire” - Specific Planlọ Osisi
Agwọ Osisi Agwọ - ingzụlite “Mama N'asụsụ Ire”
Isi Osisi Agwọ
Dị Agwọ Agwọ Agwọ
Nlekọta Osisi Agwọ
Mgbapu Osisi Agwo
Ọ bụrụ na m ga-emepụta ihe nrite maka ihe ọkụkụ kacha mma maka ndị mbido, osisi agwọ dị umeala ma ọ bụ 'Ire Onye Nnọchi' ga-emeri ya.
Nwere ike ileghara osisi a anya otu ọnwa ma ọ ga-adị mma. Ha nwere ọmarịcha mma ma maa mma n’ụlọ gị, ọbụnakwa wepu nsị (benzene, formaldehyde) n’ụlọ gị.
N’etughi ogha n’iru, ka anyi bata n’ime otu esi elezi anya, dozie nsogbu, ma gbasaa akwukwo osisi uto.
Ngwurugwu agwọ zuru ezu na-eduzi m.
Aha (s) Osisi agwo, ire nke nne di, eriri oku nke viper
Aha sayensị Sansevieria trifasciata
Mbido West Africa
Ogologo Ruo sentimita iri anọ
Ìhè Direct ìhè anyanwụ, iyo ìhè ìhè
Mmiri Dị nwayọọ
Okpomọkụ 40-85 Celsius F
Iru mmiri Nkezi
Ala Free agwụ ala
Fatịlaịza Fatịlaịza na mmiri na 20-20-20 fatịlaịza agwakọtara na mmiri mmiri.
Mgbasa Mbelata ma ọ bụ kewaa
Pests Anwụnta na-eri
Nne na Ire si Iwu nwere akwa gbara ọkpụrụkpụ, guzobere akwụkwọ. Akwụkwọ ndị ahụ gbara ọchịchịrị na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma na-etinye akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha ọkụ ọkụ na-aga n'ihu na agụba dịka epupụta. Varietiesfọdụ ụdị nwere agba nwere agba odo tinyere epupụta.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị mmadụ na-amata osisi agwọ ahụ dịka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ-na-acha akwụkwọ ndụ na-acha odo odo, enwere ọtụtụ ụdị dị iche iche ịhọrọ.
‘Black Gold’ nwere ezigbo akwụkwọ dị iche, nwere oke ọchịchịrị-akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ gbara ya gburugburu na-acha odo odo / ọla edo.
‘Black Jack’ nwere ụdị ahịhịa yiri ya, mana ọ na - eto obere oge karịa ka ọ bụ onye ikwu ‘Black Gold’.
‘Black Robusta’ dị ka ahịhịa agwọ na-acha akwụkwọ ndụ nke ọma site n’ebe dị anya, mana epupụta bụ n’ezie ọchịchịrị gbara akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Akwụkwọ ndị ahụ nwere ọtụtụ ọlaọcha fesa n'akụkụ niile.
'Cylindrica ’bu nke kachasi di iche, nke nwere ahihia gbara okirikiri nke na-adi ka osisi achara.
Mụtakwuo : Sansevieria Cylindrica Nlekọta
‘Futura Robusta’ nwere akwukwo sara mbara ma too nkpum karịa di iche iche. Akwụkwọ ndị ahụ bụ ọla ọcha na-acha akwụkwọ ndụ, na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ gbara ọchịchịrị.
'Futura Superba' nwere kpochapụwo agwọ ahịhịa akwukwo akwukwo, ma ọ na-eto eto dị mkpumkpu. Ọ dị mma maka obere oghere na ụlọ.
‘Gold Hahnii’ bụ kọmpụta kọmpụta nwere ọtụtụ akụkụ gbara ọkpụrụkpụ na etiti dị larịị. Nhọrọ dị oke mma!
Sansevieria trifasciata ‘Ọkụ Golden’
‘Golden Flame’ bụ otu n’ime ihe ọkụkụ na-atọ ụtọ. Akwụkwọ ọhụrụ ahụ na-amalite nke na-acha odo odo nke na-acha odo odo nke ọma wee jiri nwayọ “gbanye” na agba ndụ akwụkwọ ndụ eke.
A na-echekarị 'Moonshine' dị ka cultivar 'albino'. Akwụkwọ ahụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọla ọcha, na -emepụta ọdịiche mara mma na nke ọzọ.
'Laurentii' bu otu ihe ewu ewu ndi erere na ulo ahia, ya na odo odo na acha odo odo na uzo zig zagged n'etiti.
N'ihi na osisi agwọ nwere ahịhịa na-amịpụta, ọ daba n'ụdị 'ịtọ ya ma chefuo ya' ụdị ụdị osisi ụlọ. Ọ chọghị nlekọta dị ukwuu, mmiri, ma ọ bụ ọkụ, mana ị ka ga-enye ya obere ịhụnanya ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ọ na-eto eto.
Nye ọkụkụ agwọ gị na-enwu gbaa, nke na-apụtachaghị adọkpụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ọ mee nke ọma. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịdị ndụ na ọnọdụ ọkụ, ọ ga-etolite nwayọ ma nwecha agba. Ebe dị mma maka ya ga-abụ ihe dịka 3-6 ′ site na windo na-enweta ọtụtụ ọkụ.
N'ihi na osisi agwọ nwere ahịhịa na-amị amị, ha anaghị achọ nnukwu mmiri. Jide ala ubé ooh na mgbe n'elu mmiri. Ọ bụrụ n ’ị waterụọ mmiri oge oke, agwọ gị ga - abụ eze ma malite ire ere ngwa ngwa.
Dị ala kachasị mma maka ahịhịa agwọ bụ ala Afrika na-acha odo odo nke nwere ntakịrị aja etinyere maka nsị ọzọ.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịgwakọta ala nke gị, jiri usoro a:
1 akụkụ ubi ala
1 akụkụ peat
Akụkụ 2 perlite ma ọ bụ onye wuru ájá
Iji nye agwọ gị agwọ ezigbo ohere na-eto eto, ifatilaiza otu ugboro kwa ọnwa n'oge opupu ihe ubi na ọkọchị. Jiri fatịlaịza bekee dị mma nke enweghị nitrates.
N’oge oyi, hapụ fatịlaịza kpamkpam ka mkpụrụ osisi ahụ ji nwayọọ nwayọọ na-eto.
Full repotting ndu na m.
Kwesighi ịtinye agwọ gị ugboro ugboro ka ọ na-enwe mmasị ịgbanye mgbọrọgwụ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ọ dịzie arọ nke ukwuu wee malite ikpu, gbanye ya n’ime ite nke ji naanị sentimita asatọ buru ibu karịa ite ugbu a.
Mụtakwuo : Etu esi esi aghaghachi osisi agwọ gị
Mgbe ụfọdụ ndụmọdụ nke akwụkwọ ga-acha aja aja ma ọ bụ akwụkwọ niile ga-anwụ. Ọ bụrụ na nke a emee, ihe ị ga - eme bụ iwepu ahihia aka nri n’elu ala iji wepu ya kpamkpam. Enweghị isi na ibelata otu akwụkwọ ka ọ ghara itolite site na ebe a na-egbutu ya.
Jide n'aka na ị ga-eji ihe eji egwu egwu!
Dị ka ọtụtụ ụdị ahịhịa ndị na-amịpụta mkpụrụ, a na-eme ngwa ngwa nke ahịhịa agwọ site na ịkpụ akwụkwọ ma ọ bụ nkewa. Anyị enwetala ọtụtụ ozi gbasara otu esi eme ya na edemede anyị na agwọ na-agbasa usoro .
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ichebe nsị nke ahịhịa agwọ gị, gbasaa site na nkewa kama ịkpụ akwụkwọ - ọ bụrụ na ị nwaa site na mpempe akwụkwọ osisi ahụ ga-alaghachi na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Usoro Mgbasa Mgbasa Akwukwo
Bechapu ahihia nke osisi agwọ gị ma bee n'ime iberibe 3-4 ″. Jide n'aka na ị na-echeta akụkụ nke akwụkwọ ahụ bụ nke elu na nke bụ ala.
Na-etinye cuttings n'akụkụ aka nri-elu na ala ọhụrụ mix ma debe ite ahụ na mpaghara nke na-enwu gbaa, na-apụtachaghị ìhè.
Mgbe ihe gbasara 3-4 izu, cuttings ga-amalite mgbọrọgwụ. Mgbe ọnwa ole na ole gasịrị, ị ga-enwe usoro ọhụrụ nke ahịhịa agwọ iji nwee obi ụtọ!
Dị ka ọtụtụ osisi ụlọ, ahịhịa agwọ na-adị mfe mealybugs na ihe ududo . Akwukwo abuo ndia na ebuso akwukwo nke ududo gi agha n’udi ozo, na-ackingu sap ahu na akwukwo.
Ọ bụrụ na ị nwere ajọ anụ ahụ, ọ kachasị mma ịmalite na osisi ọhụrụ. Ma oburu na ijide ha, i nwere ike igbochi oria a.
Ọgụ ududo mites site misting osisi na-ekpochapụ ha. Maka mealybugs, hichaa ha na owu na-egbu mmanya
Ọrịa kachasịsịsị ga-abụ mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ n'ihi ị -ụbiga mmiri ókè. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị n'ihi na ndị na-elekọta ubi na-emeso osisi agwọ dị ka ụdị osisi ndị ọzọ na-abụghị ndị na-amị amị, na-agba mmiri n'otu usoro.
kedu ka agba agba si emetụta uto osisi
Ihe ngwọta maka mgbọrọgwụ ire ere dị mfe: mmiri na-erughị ala, na-abanye n'ime ala ọhụrụ iji mee ka mgbọrọgwụ takọọ. Nwekwara ike mkpa iwepụ ọ bụla mushy epupụta.
Nwekwara ike ịbanye n'ime agba nchara nchara na epupụta, nke kpatara site na ikwe ka mmiri nọdụ na epupụta n'oge oge oyi ma ọ bụ igwe ojii.
Q. Osisi agwọ m anaghị eto eto ma enweela m ya ruo ọtụtụ ọnwa. Kedu ihe na-eme?
A. Ọ bụrụ na ị zụrụ ya n’oge mgbụsị akwụkwọ na oge udu mmiri, ọ bụ ihe okike zuru oke maka uto na-akwụsịlata. Oge ndị a bụ ọnwa na-ehi ụra nke uto ọhụụ na-akwụsị kpamkpam ma ọ bụ nwayọ nwayọ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị nọ n’oge opupu ihe ubi na ọkọchị ma ọ ka na-eto, gụgharịa usoro nlekọta dị n’elu wee hụ ma ị naghị enye agwọ gị ihe ọ chọrọ.
Ajụjụ nke ahịhịa agwọ m na-aghọ mushy mana ala kpọrọ nkụ ma anaghị m eme ya mmiri. Kedu nke na-eme?
A. Ọ bụrụ na ị bụ onye ziri ezi na ị gaghị agafe mmiri osisi agwọ gị, mgbe ahụ enwere ihe abụọ nwere ike ịkpata: ala gị na-ejide mmiri dị oke, ma ọ bụ na ị nwere ụdị mpempe akwụkwọ. Lelee iji hụ ma ala gị oke oke mmiri ma jidekwa oke mmiri, ma gụgharịa ngalaba ọrịa iji hụ ma ị nwere ike ire ere.
Ajụjụ nke ahịhịa agwọ m na-amị amị ma ọ bụ na - arinkacha ala, gini na - eme?
A. N’adịghị ka ọtụtụ ahịhịa, akwụkwọ osisi agwọ ga-amịkpọ mgbe ha nwetachara nnukwu mmiri ọ bụghị obere! Otú ọ dị, ọ bụrụ na epupụta nwere ahịhịa ahịhịa ma ọ bụ bido ịtụgharị, ọ bụ ihe ngosi doro anya na osisi gị anaghị enweta mmiri zuru oke.
Q. Agwọ osisi ọ na-egbu egbu?
A. Akụkụ niile nke agwọ agwọ na-egbu egbu. Nsi a hụrụ n’osisi ahụ nwere ike ime ka ire na akpịrị zaa ma daa ụda. N'okwu ndị siri ike enwere ike inwe nsogbu na tract digestive.
Ọ bụ ezie na obere usoro nke osisi anaghị emepụta ihe mgbaàmà ọ bụla, nnukwu usoro nwere ike ịkpata ọgbụgbọ ma ọ bụ ọgbụgbọ.
olee otú dị anya na ohere tomato osisi
ụzọ kasị mma iji chekwaa peeled garlic
ụdị nne na iwu ire osisi
ka esi eto nne na ire
esi elekọta osisi guava